တန္ဖိုးျခင္းကြာ တယ္ဆိုကာ ေမပန္းခ်ီကို ေျဗာင္က်က် တိုက္ခိုက္လာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဘဘီေမာင္.. – Cele Oscar
October 5, 2021 By L YC News
ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီကတော့ အမိုက်စား ဘော်ဒီနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ဒါအပြင်မေပန်းချီကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပါ ရိုတ်ကူးရပြီးအနုပညာနယ်ပယ်မှာ နေရာတခုရရှိနေပြီဘဲဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီကတော့အနုပညာ အလုပ်တွေရပ် နားထားရတာကြောင့် live လွှင့်ပြီး စျေးရောင်းချနေ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့မေပန်းချီက တစ်မိနစ်စာအွန်လိုင်းကြောငြာလေးရိုတ်ကူးရမယ့်အကြောင်းပြောပြလာပြီးနောက် ကြော်ငြာခ ၁၅ သိန်းကို ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နောက် သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်ရဲ့ စောင်းမြောင်းပြောဆိုမှုတွေကြောင့် ဂယက်ထလို့နေပါတယ်။
ဒီကိစ္စတွေကို မသိဘဲ မိန်းမ ကို ထိဓားကြည်ဆိုကာ ချက်ချင်းပဲ လိုင်းပေါ်မှာစတေးတပ် ရေးတင်လာပြီနောက် စဖောင်းတာ သူ့မယား ဘေဘီမောင် မှန်းသိသွားကာ ချက်ချင်းပဲ ပို့စ်ကို ပြန်ဖျက်သွားတဲ့ အဆိုတော် သားဂန်းကို လည်း ပရိတ်သတ်တွေက ဝိုင်းပြီး လှောင်ဆဲနေကြပါတယ်နော် မေပန်ချီနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်းဝမ်းသာရတောင် တင်ပေးလာခြင်းသာဖြစ်ပြီး သူမကို ပြောင်ကျကျအဆင့်အတန်းမရှိတိုက်ခိုက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်းဘေဘီမောင်ကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။
မေပန်းချီကတော့ ဒဲ့ပဲအခုလိုရေးသားလာပါတယ်။ “မိတ်ကပ်ဆရာတယောက် နဲ့ မိန်းမ.တစ်ယောက်ကိုပြောချင်ပါတယ် ဘာတဲ့ (၁)မီးနစ်စာ.ကြော်ငြာကို(၁၅)သိန်းရတာဆိုတော့(ဖ) ခံတာပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအတိုင်အဖောက်ညီညီ …ots ဆန်ဆန်ပြောနေကျ.တာများစိတ်ဓာတ်ကဘယ်လောက်တောင်အောက်တန်းကျလိုက်သလဲဆိုတော့ကာကြည့်ရတာအနုပညာ.စစ်စစ် နဲ့ အဲ့လောက်အမောက်မ.ရဖူးခဲ့တာထင်ပတစ်ချက်ပြော.ပြအုံးမယ်နော်. (၁)မီနစ် ကြော်ငြာဆိုတိုင်း(၁)မီနစ်သွားပြီး မတ်တပ်ရပ်ပေးရတာ.မဟုတ်ဘူးနော်
မနက်(၆)နာရီကနေညနေ.(၆)နာရီ တနေ့လုံး.မနားတမ်းရိုက်ခဲ့ ရတာပါနော်(၁)မီ.နစ် စာလေးရဖို့ငါမရီချင်ဘူးနော် မိန်းမအချင်းချင်း အမြဲတိုက်ခိုက်နေ.တာစကားတွေနဲ့ယုတ်ညံ့နေတာတွေ စင်တင်လေ.သံတွေကသိပ်တော့မဟုတ်သေးဘူးကိုယ်အလုပ်ကို.ယ်လုပ်ပါနော် စောင့်ကြည့်မ.နေပါနဲ့live saleလဲအခုမှစလက်ခံပြီးလုပ်တာ.ဆိုတော့ကာဈေးသည်ပါစပ်တော့မဖြစ်သေး.ဘူး ခါးလဲမပြ.တတ်တော့ ပုံမှန်လေးပါပဲလူစိတ်ဝ.င်စားမူ့က 🙂🙂
ပြီးရင်ပန်းနုသွေးတွေ လာ.လာမလုပ်နဲ့ ရွံတတ်တယ်.😁ပြောထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို.တော့မပြတော့ဘူး နား.မခံနိုင်လို့အဆင့်မရှိတော့လေ(၁၅)သိန်းဆိုတာအများကြီးလျှော့ပေး.ထားတာပါနော် ဒါရိုက်တာကြီးတွေရေးလာ.ကြည့်ပါအုံးအယ်မရယ်အ.ဆင့်မှီတဲ့ကြော်ငြာတွေရုပ်ရှင်ကား.တွေရိုက်ခဲ့ဖူးလို့လားကွား မေးပါ.ရစေရိုက်ချင်တာတောင် အေားလီမင်းသားတွေ.နဲ့ကိုယ်တိုင်အကုန်အကျခံထုတ်ရိုက်ခဲ့ရ.တာလေဆင်ခြင်ပါနော် အဆင့်ကြီးကတ.အားနိမ့်နေပြီ ရက်ကွက်ထဲက ငါးသည်တောင်အဲ့လောက်စ.ရိုက်မဆန်ဘူးမတူဘူးလေ မတူဘူးလေလို့ထည့်ထည့်မပြောပါနဲ့ လုံးဝမတူတာပါ တူလဲမတူပါရစေနဲ့ 🤮🤮🤮(15)သိန်း.လောက်က ဂျေဝင်စရာလိုလို့လာကွားအော် နောက်တစ်ခုက တချို့ .အလုပ်ရှင်တွေက မရောင်းရရင်တောင် ထိုင်ပေးနေ.တာနဲ့တင်ကျေနပ်နေ.ကျတာ 🙂ငယ်ငယ်လေးထဲကဈေး.မရောင်းဖူးတော့ မကျွမ်း..ကျင်ဘူး ကျွန်မလေအဲ့.တော့ ရောင်းရရမရရကျေနပ်လို့.ဌားကျတာ🙂🙂 သာသာယာယာပဲ ပေါက်ပန်းဆေး.ပြောပြီးမရောင်းတတ်ဘူး” လို့ရေးသားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
Burma Cele Fan